100 Vekudya muLas Vegas kuti ikubatsire kugutsa chero chido chekudya
Zvokudya Kwamunofanira Kuda Kudya muLas Vegas
Iwe unofunga nezvezororo rinotarirwa nezvokudya zvakanaka nekumwa here? Unofunga kurongedza uchidya zvako here? Las Vegas ine nzvimbo dzakawanda dzekutengesa uye zvokudya zvekudya izvo zvingangodaro iwe unofanirwa kutora zvishoma kudya kwepurogiramu yako yezuva nezuva asi iwe unofara kuti wakaita. Ichi chinyorwa chekuwedzera kwemazana zana eRas Vegas chinogara chichishandura saka ramba uchidzoka shure kuti uwane kuti unofanirwa kudya pa Las Vegas strip.
Nemhaka yokuti ndine chido chekureva zvishoma ini ndinofungidzira kuti ndinofanira kupa mutsara mukuru weresitorendi muLas Vegas apo iwe unofanirwa kudya pairi kuitira kuti iwe unoda kundipinza muziso. Ndiri kureva, chaizvoizvo, ndiani ane nguva yekudarika nhamba huru yematunhu? Ita kuti zvive nyore kune muverengi uye usangonyora nzvimbo idzi dzose. Batsirai shamwari yevamwe vega!
Heino huwandu hwemashoko ezana (zana anopfuura zana ...) dzekudya dzandinofunga kuti unofanirwa kudya nadzo. Ndiri kutanga ne10 kubva pane zvandinoda uye ndotanga kupinda mumapoka mashomanana uye zvakare kutyisa kukuru kwezvenyu kunongokuita kuti uve nenzara.
Zvinonzwisisika: Kune zvikafu zvinopfuura zana paresitorendi. Aya maresitorendi anowanzo pavara reLas Vegas. Aya ndiwo mazano angu apo iwe paunofunga uye uchifunga kuti ndinopenga ndinoziva kuti ndinopenga zvishoma nezvokudya. Uyewo, zivai kuti ini ndakafanana newe kana zvasvika pakudya. Dzimwe nguva ndinoda kufanana, nedzimwe nguva ndinoda mari shoma, mabasa emiori uye ane utano ine nzvimbo pamwe chete. Ndine chidhakwa chekudya chinoita kuti ndinzwe zvakanaka saka enda uye unakidzwe.
Iri rondedzero rinogara richichinja saka checkout zvimwe zvimwe zvingashandiswa pakutsvaga maLas Vegas.
Zvokudya Zvakanakisisa kuLas Vegas - Ndeipi Kudya muLas Vegas? Aya ndiwo maresitorendi akakwirira muLas Vegas kubva pa pizza best to restaurants best for kids. Iyi ndiyo nzira yakanakisisa yekutengesa kunodhura kuLas Vegas.
The Complete Guide kuLas Vegas Restaurants - Kana uchida mutungamiri wakakwana wekudya muLas Vegas uchawana zvose zvaunoda iko pano. Kune nzvimbo dzakawanda zvekudyera kuLas Vegas kuti hazvisi nyore kugadzira imwe chete mutsara. Pane iwe uchawana zvigaro zvekukubatsira kuita sarudzo nyore nyore.
Zvokutengesa Zvokutengesa kuLas Vegas - Paunenge usingadi kushandisa mari yakawandisa pane zvekudya muLas Vegas unoda mazita kuresitorendi shoma kuLas Vegas.
Kumba kambani muLas Vegas - Ndiyo yakanakisisa kudya kwezuva here? Zvinogona kuva.
Zvokudya Zvakanakisisa Zvinotengeswa muLas Vegas - Zvokudya zvinogona kutengesa asi chikafu chakanaka chemutengo mukuru chinogona kunge chakaoma kuwana. Iyi nhamba yezvokudya zvakakosha zvikuru muLas Vegas inopindirana nemitengo iri paLas Vegas mutsara asi iwe unogona kuwana chinhu chakanakisisa pane kudya kwakanaka chaizvo muLas Vegas.
Zvokudya zvandinoda 10 zvinonakidza muLas Vegas (zvino, ndinoshandura nguva yose)
Aureole paMandalay Bay inofanirwa uye kwete kwete nokuti vane chisarudzo chikuru chewaini. Menyu yakashandurwa uye yakanakisisa yekudya inonzwa ichinyatsogadzikana uye ichikoka apo ichichengetedza kubata kwekirasi. Fungidzira shamwari yako yepamusoro waiva mukori wenyika uye akakudanira kumba kwake kuti uwane kudya kweupenyu hwose.
Vari kuzviita zvakarurama.
Kukohwa paBagiogio ndiro gorosi Chef Roy Ellamar yeresitorendi umo furazi yekudya haisi kungoita basa remuromo. Murume nemudzimai mukushamisika kukuru neChef's Big Island yeHawaii midzi uye iwe unowana mamwe magetsi uye basa rinofanirwa kuita vashandi pano chikamu che Ohana yako.
Costa Di Mare paWynn Las Vegas yose inosangana nezvakanaka. Hungu, ndezvemahombekombe makuru ehove ayo anotenderera zuva nezuva uye asingabatsiri kushanda asi chaizvoizvo pamusoro pekunzwa kunakidza. Mhepo yakadaro ndeyokuti iwe haugone kubatsira asi kunzwa sekunge uri pamusoro penyika uye basa riri kuitwa mukicheni richagutsa zvido zvako zvose. Ichi ndicho chaicho chiitiko chekugadzirira.
L'Atelier de Joel Robuchon - Zvinotora zvishoma kwandiri kuti ndide kupinda uye ndigare pamberi pekoni yekuratidzira pane iyi yekudya.
Iyi nzira yakashata yokudya yakaisvonaka ichiri pamucheto wokupedzisira asi hazvibviri kuva nenguva yakaipa pano.
Carnevino - Kana uchida nyuchi iwe uchada zvavanoita paCarnevino. Inofanirwa Kuva: Mwedzi 8 wakaoma wakwegura wenzombe.
Carlos 'n Charlies Ndiri munhu ari kuedza kukuita iwe kuti ugarezve weChirungu Kuputsa. Inofanira Kuva: Ceviche uye Margarita ane chigaro muchecheche kumashure.
Bouchon Iwe haugoni kuwana chigaro paFrench Laundry asi iwe unogona kudya paBouchon uye unowana matarenda aT. Thomas Keller. Unofanira Kuva Nekudya Kwazvo.
Gordon Ramsay steak - Usanetseka kuti hauzodanidzwi nemucheka asi iwe unofara munzvimbo ino nemhepo yakawanda uye zvokudya zvakanaka. Inofanirwa Kuva: Ihove uye chiputi kana nhokwe.
Le Cirque - Iyi ndeimwe yezvakanakisisa zvekudya muLas Vegas. Icho icho chakanaka uye chikonzero nokuti chiitiko chose chichakufadza iwe. Vashandi vanokuita kuti unzwe wakasununguka uye zvokudya zvinokosha. Unofanira Kuva: Kuravira menyu.
Jimmy Buffet's Margaritaville - Hongu, ndinozvibvuma. Ndiri Parrot Head uye ndinozvirumbidza nazvo. Ndiri kuimba nziyo dzose uye ndinopfeka flip flops uye ndinogona kunzwisisa chikepe chakanaka chinonwa mu blender. Enda mberi unditonge.
Omirira ... mamwe mavada
Tetsu - Ichi ndicho chiratidziro chekuratidzira chakasiyana nezvose zvawakamboona. Kunyange zvazvo chikafu chako chikagadzirirwa pamberi pako chiri chakanaka pamusoro pezvaari uye dzidzo uye kupenya.
Spago Iwe unoda nyama yemafuta uye 3 magirasi ewaini. Iyi ndiyo yekutengesa yeLas Vegas iyo yakatanga kuchinja kwekudya pamutsara.
Jean Georges Tora chikamu chikuru chemombe uye edza kubata dumba.
Le Thai - Iyi ndiyo chaiyo inonhuwira asi doro uye ndiro yeoodles pari ndiyo yakakwana.
Hash House a Go Go - Zvikamu zvakakura saka iva nechokwadi chekugovana.
Nobu - Sushi yakakurumbira yakaita chaizvo sezvaungaita iwe kana iwe wakanga uine hip uye unofadza. Nenzira yakanaka.
Public House Las Vegas (Venetian) - Zvichida musarudzo yakanakisisa muLas Vegas uye yakanakisisa yePoutine. Shamwari dzangu dzeFrance dzeCanada kunyange zvakadaro. Nhamba yewaini ndiyo yakanakisisa yezvimwe zvekudya muLas Vegas.
Fogo de Chao - Caipirinha uye nyama yakabva pane imwe skewer. Handizoiti flanti asi ini ndamboudzwa kuti zvakanaka zvakare.
Ndisina mari: Ndinogona kunge ndisina kutenga asi kushandisa zvishoma hazvireve kuti unotofanira kurasa unhu. Edza nzvimbo idzi uye iwe unogona kunge uine zvokudya zvako zvose muLas Vegas mumaresitorendi asina kuvhara chikwama chako.
Pink's - Ndiri mufudzi we Vegas Dog asi chaizvoizvo ndinoisa mukati mebhandi uye ini ndakagadzirirwa.
Earl weSandwich - Iri ndiro rakanakisisa sandwich riri pamutsara. Iwe unogona kufunga kuti zviduku asi unodya zvishoma uye iwe ugozadzwa neino chete. Huge bargain.
Slice ye Vegas - Slice uye doro paawa inofadza kana saladhi uye imwe pasta yekudya zvakakwana. Pamurai chimwe chinhu uye mutengo wacho unoderera zvakanyanya.
Carnegie Deli - Shandisa sandwich guru kune umwe waunoda.
Zvakanaka zvekunwa nemwi zvokudya: Isu tose tinoda dzimwe mbesa, kurudyi?
Red Square - Haisi chaiyo chikafu cheRussia asi yakagadzirisa zvikuru. Caviar uye Vodka haimboiti pfungwa yakaipa.
Burger Bar - Yakanaka Burger ine mhando yakanyanyisa doro.
Cabo Wabo - Waborita pane patio ane zvimwe chips uye salsa. Vanhu vakuru vanotarisa.
Guy Savoy - Fancy uye inonakidza. Ngoro yechingwa!
Joel Robuchon - Apa ndipo paunenge uine kudya kwakakosha uko mari isiri nyaya. Zvinogona kunge zviduku zvishoma asi kana iwe usingabvumiri kuti uzorore. Kana iwe ukanyemwerera uye kuseka iwe uchange uine nguva yakanaka uye kudya kukuru.
Scarpetta - Ndichabhadhara zvepaghetti zuva rega revhiki. Usakanganwa chingwa chingwa. Ndiri kukunyevera ikozvino.
Portofino paRirairo - Iri denga rakavanzika haritauri zvakakwana sezvo zviri nyore pakati pezvokudya zvakanakisisa paRas Vegas.
Martorano's - Nditore ini kunyange nyama yakakura yemhuka uye ndiite kuti nditarise terevhizheni yakaipa apo ini ndichiedza kuziva kuti kicheni chinotumira chii chinotevera.
Enoteca Otto- Lunch. Saladi. Pasita. Waini. Zvimwe waini.
Carnevino - Mhepo yakakura pane imwe nyika. Zvakanaka, pane imwe nzvimbo muSydney nechinangwa che ... Ndiyo World Class kuCarnevino.
Hussongs - Yakabikwa nemafuta, elote uye tomatillo salsa. The ceviche yakanakawo zvakare. Kune nzvimbo shomanana dzekudyisa mexican muLas Vegas asi nokuda kwezvinhu zviri nyore izvi ndizvo zvandinofarira.
Tacos uye Tequila - Tequila uye carnitas tacos. Vane chikafu chekudya burrito icho chakakura zvakakwana kugovana.
Carlos 'N Charlie - Ndiri mucheche we tacos uye ceviche asi masikati margaritas uye mamwe makuru, kutamba kunotyisa pamapatio ndechikonzero nei ndinoda nzvimbo iyi.
Tacos el Gordo - Nyore, tacos shoma mune imwe nguva, pfupi risingadhura pamba pamutsara.
VaJaviers - fancy yekudyara yeMexico asi iyo yakanaka pakudya kwemazuva kana uri kuCityCenter. Tora ndiro taco uye ugovana nevanhu vashomanana kana iwe uchida zvakanaka.
Cabo Wabo - Haisi chaiyo yekudya kwekuMexico asi inhengo chaiyo pa patio.
STK - Iyi i nightclub steak. Nzvimbo iyi inonzwa sechikwata uye simba rinofanirwa nekushanyira kwenguva refu.
Centre Cut - Iyi inzvimbo yepamusoro yepamusoro uye nzvimbo yangu yakagadzirirwa nzvimbo yepamusoro yemombe.
Dzimba Dzekare - Ikoko mumoyo weKesari Nzvimbo dzepamusoro, gara pedyo nechepamusoro kweresitorendi kuti uone zvakanaka kana kuti uchienda kune rumwe rutivi rwechirano.
Carnevino - Awesome. Best. Hukuru. Ndezvipi zvakare zvaunoda kuziva.
SW steak - Elegant asi yakasununguka. Chikoro uye chikamu chikuru uye chibereko chakanaka.
Jean Georges - Gara pavhare uye taura pamusoro pe bartender uye iwe uchaona chikamu chezvinhu zvinonzi Vegas zvose.
Strip Steak - Michael Mina haafambi nenzira inoshandura maonero ako.
Gordon Ramsay Steak - Iyo steaks yakanaka uye inogona kuva yakanaka nerutivi rweHove uye Chips. imwe ye3 Las Vegas restaurants yeChef Ramsay pamutsara
Nobu - Gara muimba yekuzorora uye iwe uchanzwa uchitonhora sezvinotarirwa nevamwe vose.
Blue Ribbon Sushi - Yakanaka sezvainowana kana iri kuuya kuSushi muLas Vegas
Morimoto paMGM Grand iri munzvimbo yepamusoro 5 yekutengesa kuLas Vegas iye zvino. Icho chakanaka pane zvose.
Kumi paMandalay Bay - Sushi Siri uye nekuda kwekuti nzvimbo dzakasvibirira sehovha.
Sake Rock paPark Las Vegas- Paunenge uchida imwe karaoke ne sushi yako uye iwe unoda iwe. Iyi inzvimbo yepamusoro yezvokudya paPark Las Vegas.
Gungwa Thai - Affordable Thai uye imwe yero yezvinonhuwira. Iwe unoda kuvabvunza kuti vanyatsorinyorera kana iwe uri kutsvaga kupisa.
Momofuku kuCosmopolitan Resort - Ramen uye dhaka ndizvo zvaunoda kuziva. Izvi ndizvo zvinofanira kuedza.
Lemongrass paAria - Fancy Thai mune imwe nzvimbo yakanaka chaizvo. Noodles uye prawns ndapota.
Beijing Noodle - Hand yakabudisa noodles paakanga agere nechinangwa chechiito chose.
Le Thai - Iyi ndiyo nzvimbo iri muDowntown Las Vegas saka tarisira kana iwe uchida kana kugara pasi.
Gordon Ramsay BurGR - The burger yakanaka, bhu iri nani, Dawg ndiyo yakanakisisa. Iwe unoda zvisarudzo uye ivo vanezvo.
Holsteins - Bheri dzakanaka uye burgers akanaka pamwe nemenyu yakazadzwa nezvinyaradzo zvekudya
Grimaldis - Kana New York ichida iwe? Aiwa, asi zvakanaka kwazvo saka iwe unofanira kupinda uye kuparadzanisa pie.
Chinyorwa Pizza - Ndiyo nzvimbo yawakanzwa nezvazvo asi hauna kuona. Iyo yakazaruka nguva uye ichaita kuti bato rako riende kwenguva yakareba kupfuura iwe uchida.
Rira - Hove uye Chips uye imwe yezvinwiwa dzakawanda zvavari shure kwebar. Iyi inzvimbo inofadza kana mimhanzi iri kutamba kana kana mutambo uripo.
The Pub - Massive masitereji emhando, ganda guru, uye patio pedyo nehombe yeMedro Carlo.
Todd Shona PUB - Enda mberi uye upedze ibhiya yako pasi pemasekondi manomwe uye ivo vachakupa iwe wakasununguka.
Public House Luxor - Zvokudya zvebhasi nemitambo kuenda pamwe nedzimwe doro dzakanaka. Kana iwe uchida kuenda kuhutano ivo vane zvakawanda pane menyu.
Public House Las Vegas - Mazita akawandisa uye kutarisa kwemazana uye kunzwa kunzvimbo iyi inofadza kunwa doro.
Zvipfumbamwe Zvakanaka VaIrishmen -Iyai apo boka racho riri kutamba uye iwe unogona kuchida kana kuvenga. Simba guru, rinonzwika uye rinofanira kushanyira.
Gordon Ramsay Pub - Bheri yangu itsva inonakidza uye zvinhu zvakawanda zvinonakidza pamusangano. Edza kusvika ipapo nokukurumidza apo munhu wose anoda kudya pano.
Zvimwe zvekudya zvekunakidzwa kune iwe paunofanira kudya muLas Vegas:
Pamusoro Penyika - Maonero akanaka asi chikafu chiri nani.
Miorivhi - Kudya neMvura yeBelgiogio.
Mon Ami Gabi - Chikudya chekudya chishambwa nechinangwa chechidimbu kana nguva refu yekupedzisira kwemanheru pasi pezviedza zveEiffel Tower.
TAO - Unoda kutamba here? Iyi nzvimbo ichaita kuti iwe ude.
Libertine Social in Mandalay Bay - Cocktails iyo yakanakisisa uye inoita kuti mushure mekunge iwe muvepeti wepamusoro. Iwe uchagovera mahwendefa uye iwe unonwa zvishoma.
Lakeside Grill - Usasununguka kana iwe ukaona kuti frog inoratidzika ichiona chinhu ichibuda mumvura.
Lagasses Stadium - Nzvimbo yakanakisisa yekuona mutambo uye ine kudya kwakanaka panguva imwechete.
Fleur - Sei, nokuti Hubert Keller akaita zvimwe zvinhu zvakanakisisa pano.
Dick's - Enda pano kunyorerwa iwe uchidya. Ndiyo hilarious uye burger uye doro ibhati yakanaka.
Bucca di Peppo - Mhuri inotengeswa inotengesa muhotera yeLas Vegas. Hungu, pane nguva dzose nzvimbo yevaya vari mutsamba yangu.
Emeril's - Tora nokukurumidza kuenda kumaodzanyemba naEmeril.
Border Grill - Fancy Southwestern chikafu chinogona kuva Mexican kwete chero cheMexican ndinoziva. Zvakanaka zvakadaro.
Julian Serrano - Tapas kubva kuSpanish chaiye kuti aende pamwe neni Paella.
Bhara Masa - Kuisa insane asi inogona kudhura.
Sage - The cocktails inoshamisa uye chiitiko chokudya chichakufadza.
China Poblano - Tacos uye dim sum. Akangwara asi akanaka.
Milos - Zvokudya zvitsva zvinosanganiswa mune imwe Vegas hip.
Grand Wok naSushi - Ichi chakafanana nekona yangu yekutora nzvimbo. Nyaradzo.
Noodles - Fancy noodles kana zvisikwa zvinodhaka.
Country Club paWynn Epic brunch.
Cannaletto - Vanhu vachitarisa uye waini. Unoda chimwe chinhu here?
Vagari - Nyaradzo yekudya uye kushamwaridzana. Iwe zviri nani edza bhanan macadamia nut keke uye mbatata yakatakurwa.
Aureole - Vhesi yewaini inonakidza asi iine mabheji maviri kune kudya kwako uye iwe unogona kunyanya kufadzwa.
Charlie Palmer Steak - Usashambadza newaini. Mhando yepamusoro mune imwe nzvimbo inonzwa inodzidza.
Roy's - chikafu chekuHawaii mune imwe nzvimbo iyo inonyanya kushamwaridzana kunze kwekugara asi ichiri chido chaunoda /
Trevi - Zvikamu zvakawanda uye nzvimbo yakanaka kuona yese yeLas Vegas kufamba.
Blossom - Fancy Asian dining inokufadza.
Lago ku Bellagio - Maonero ezvitubu neItaly mahwendefa maduku kubva kuna Chef Julian Serrano.
Canter's Deli - Makona nenyuchi uye pastrami!
Lobster ME - Lobster rinotora mutengo usingatauriki.
RM Vezvokudya zveMhenderekedzo yeZvuru - Zvisingagoneki masikati masikati zvakanyatsonatswa pazvokudya asi zvitsva uye zvakagadzikana.
The Best Kid Friendly Restaurants muLas Vegas
The Best Hotel Gym & Fitness Program muLas Vegas
Nzvimbo dzePaki uye Masango eMvura muLas Vegas neNevada
Nhanho Kubva Paya Iyi Las Vegas Scams
Kwokugara MuLas Vegas: Tsvaga Izvo Yakanaka Hotel muLas Vegas
Gordon Ramsay BurGR Las Vegas paPetet Hollywood
Survey Inoti: Inattentive Vabereki ndivo Vanonyanya Kutya Vafambi
Zvinhu Zvikuru Zvokuita muJapantown, San Jose
Zvokudya Zvakanakisisa neBhari Pedyo neScross Circle
Salt Lake Area Mipata Yemvura, uye Mapapiro Emapapu
Zvinyorwa zveIrish muSan Francisco
Mazuva manomwe muIsrael Rwendo Rwendo
Matanho Akanakisisa Akaitwa muGermany
Sungano Imba muArizona
10 Makasviki Anowanikwa MuNew Orleans
Skate Parks muWashington DC, Maryland uye Virginia
DAR Museum (1700 t0 1850 Zvivakwa muWashington DC)
8 Nzira Dzokushandisa Nguva Yako paVenetian Las Vegas
Mutsika Wekufuka Mucheka Mutsvuku Mumwaka Mutsva weChinese